Umuthi Wokugomela i-Pfizer-BioNTech COVID-19 Ugunyazwe Izingane 5-11 Ezimweni Eziphuthumayo
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Chofoza lapha uma lokhu kungukukhishwa kwakho kwabezindaba! » Umuthi Wokugomela i-Pfizer-BioNTech COVID-19 Ugunyazwe Izingane 5-11 Ezimweni Eziphuthumayo
Namuhla, i-US Food and Drug Administration igunyaze ukusetshenziswa okuphuthumayo Komgomo we-Pfizer-BioNTech COVID-19 ukuze kuvinjelwe i-COVID-19 ukuze kufakwe izingane ezineminyaka engu-5 kuya kweyi-11 ubudala. Ukugunyazwa bekusekelwe ekuhloleni okuphelele nokungafihli kwedatha kwe-FDA okufake phakathi imibono evela kochwepheshe bekomiti labaluleki elizimele abavote kakhulu bevumela ukuthi umuthi wokugoma utholakale ezinganeni ezikuleli qembu lobudala.
Amaphuzu abalulekile kubazali nabanakekeli:
• Ukusebenza ngempumelelo: Izimpendulo zamasosha omzimba zezingane ezineminyaka engu-5 kuya kwengu-11 ubudala zaziqhathaniswa nalezo zabantu abaneminyaka engu-16 kuya kwengama-25 ubudala. Kulolo cwaningo, umuthi wokugoma usebenze ngo-90.7% ekuvimbeleni i-COVID-19 ezinganeni ezineminyaka emi-5 kuye kweyi-11.
• Ukuphepha: Ukuphepha komgomo kwacwaningwa cishe ezinganeni ezingu-3,100 ezineminyaka engu-5 kuya kwengu-11 ezithole umgomo futhi akukho miphumela emibi kakhulu etholakele ocwaningweni oluqhubekayo.
• IKomidi Lokweluleka leCenters for Disease Control and Prevention (CDC) mayelana Nezinqubo Zokugoma lizohlangana ngesonto elizayo ukuze lidingide ezinye izincomo zomtholampilo.
“Njengomama nodokotela, ngiyazi ukuthi abazali, abanakekeli, izisebenzi zesikole, nezingane bebelindele ukugunyazwa kwanamuhla. Ukugomela izingane ezincane ngokumelene ne-COVID-19 kuzosisondeza ekubuyeleni esimweni esijwayelekile," kusho Ibamba likaKhomishana we-FDA uJanet Woodcock, MD "Ukuhlola kwethu okuphelele nokuqinile kwedatha ephathelene nokuphepha nokusebenza komgomo kufanele kusize ukuqinisekisa abazali nababheki. ukuthi lo mgomo uhlangabezana nezindinganiso zethu eziphakeme.”
Umuthi wokugomela i-Pfizer-BioNTech COVID-19 wezingane ezineminyaka engu-5 kuya kweyi-11 ubudala unikezwa njengochungechunge oluyisisekelo lwemithamo emibili, ngokuhlukana kwamasonto amathathu, kodwa umthamo ophansi (ama-microgram angu-3) kunalowo osetshenziselwa abantu abaneminyaka eyi-10 nangaphezulu. (12 micrograms).
E-US, amacala e-COVID-19 ezinganeni ezineminyaka emi-5 kuya kweyi-11 enza u-39% wamacala kubantu abangaphansi kweminyaka eyi-18. Ngokusho kwe-CDC, cishe amacala ayi-8,300 19 e-COVID-5 ezinganeni ezineminyaka eyi-11 kuye kweyi-17 aholele ekulalisweni esibhedlela. Kusukela ngo-Okthoba 691, bangu-19 abantu abashonile abavela ku-COVID-18 e-US kubantu abaneminyaka engaphansi kweyi-146, kwathi abangu-5 bashona eqenjini leminyaka emihlanu kuya kweyi-11.
“I-FDA izibophezele ekwenzeni izinqumo eziholwa yisayensi umphakathi nomphakathi wezokunakekelwa kwempilo ongathembela. Siyaqiniseka ngokuphepha, ukusebenza kahle kanye nedatha yokukhiqiza ngemuva kwalokhu kugunyazwa. Njengengxenye yokuzibophezela kwethu ekwenzeni izinqumo obala, okuhlanganisa umhlangano wethu wekomiti labaluleki bomphakathi ekuqaleni kwaleli sonto, sithumele amadokhumenti namuhla asekela isinqumo sethu kanye nolwazi olwengeziwe olunemininingwane yokuhlaziya kwethu idatha izothunyelwa maduze. Sithemba ukuthi lolu lwazi lusiza ekwakheni ukuzethemba kubazali abathatha isinqumo sokuthi izingane zabo zizogonywa yini,” kusho uPeter Marks, MD, Ph.D., umqondisi we-FDA's Center for Biologics Evaluation and Research.
I-FDA inqume ukuthi lo mgomo we-Pfizer uhlangabezane nemibandela yokugunyazwa ukusetshenziswa okuphuthumayo. Ngokusekelwe kwingqikithi yobufakazi besayensi obutholakalayo, izinzuzo ezaziwayo nezingase zibe khona zomuthi wokugomela i-Pfizer-BioNTech COVID-19 kubantu abaneminyaka engaphansi kwemi-5 zidlula izingozi ezaziwayo nezingase zibe khona.